I-china agglomerator pelletizing machine manufacturers kanye nabaphakeli Imishini Yokuceba
Elihambayo: adlulisele PP PE ifilimu noma ishq zibe compactor / feeder. PE ifilimu compactor: kwasani futhi cindezela ifilimu, andfeedcompressed ifilimu ku extruder ngenkani, ukwenza umkhiqizo umkhiqizo phezulu futhi uzinzile. Uhlelo Extruding: plasticizing impahla negesi kuyakhathaza.
Uhlobo: uhlobo lwendandatho yamanzi nokuma kohlobo lokuma
umugqa we-pe pe we-pelletizing ulayini / we-Plastic film granulator
Lo mshini wokwenza amanzi opholile wamanzi opholile wamanzi ungenye yesigaba sokuqala seplastiki esivuselelayo, esifanele izinhlobo eziningi zemfucumfucu yezinto ezenziwa kabusha zepulasitiki nokwenza i-pellet, njenge-PP, i-HDPE, i-LDPE, i-LLDPE Film EVA ne-PE foam kanye ne-foam ephothiwe izinto zesikhwama, njll. Ifilimu ingacindezelwa ku-compressor bese ihluthwa, ayidingi umshini we-crusher.
Futhi inomklamo othuthuke kakhulu, uyaqinisekisa ukuthi lo mshini unokuphila okude nokusebenza kahle kwezomnotho ekusebenziseni.a
1. Isikulufa nomgqomo kwenziwa nge-38CrMoAlA noma i-Bi-metallic, umlomo wokungena ophathwe nge-alloy ekhethekile: impilo enamandla kakhulu futhi ende.
2. Ukusebenza okulula: kunokulawula okuzenzakalelayo okushisa okuzenzakalelayo nokusebenza okuzinzile, Ngemuva kokulungisa kahle, abasebenzi aba-1 noma aba-2 banele ukusebenzisa lo mshini, ukondla izinto zokwakha nokushintsha isamukeli se-pellet.
3. Izindleko eziphansi ekusebenziseni ngemuva kokuklama kabusha: manje lo mshini onomusa ungokonga kakhulu emthonjeni wamandla kagesi futhi namanzi. Empilweni ende yokusebenza kwalo mshini, ungonga imithombo eminingi emandleni!
4. Ukukhishwa okuphezulu, impilo ende yokusebenza nomsindo ophansi: ngumshini wepulasitiki ofanele wokuvuselela umshini wepelletizer kulezi zinsuku.
Kuwo wonke lo mshini sinokuhlangenwe nakho okuningi kuwo eminyakeni engaphezu kwengu-10, mngani wami, mane ungithumele i-imeyili, ngizokunikeza isiphakamiso senani futhi ngenze lokho okuthengiswayo kuncike ngqo kuzidingo zakho.
Umshini we-Agglomerator onokusika okuchelela: ukwenza kabusha ifilimu le-PE PP nezikhwama ezilukiwe.
I-Agglomerator Pelletizing Machine Umshini omkhulu we-PP wokuxolela umshini opulasitiki weplastiki
Yonke imishini, sizenzela thina ukunciphisa izindleko zamakhasimende ethu.
Umkhiqizo we-2.Genuine ngekhwalithi enhle kakhulu
Sikhetha izinto zethu eziqinile kakhulu.
Zonke izinto eze efektri yethu kufanele ziphase isivivinyo sekhwalithi
Izimpahla ezingekho ezingeni zibuyiselwa kumphakeli.
3. Ama-engerneers akhona ukukhonza phesheya kwezilwandle
Inkampani yethu ihlinzeka ngokulethwa kwesikhathi kanye nohlelo lwayo lokuhlinzeka oluhlelekile.
Sibheka kakhulu yonke imininingwane enqubeni yokukhiqiza.
Ukulawulwa kwekhwalithi embonini yethu kuqinile.
Konke okwenziwa okungaphelele kufanele kuphathwe futhi noma kwenqatshwe.
Yonke imishini kufanele ihlolwe ngaphambi kokuletha kumakhasimende ethu.
Esifuna ukukwenza ukunikeza amakhasimende ethu umkhiqizo osezingeni eliphakeme onempilo esebenza isikhathi eside futhi esebenza isikhathi eside.